Dawladda Suuriya oo gacanta ku dhigtay goob afar sano laga haystay - BBC Somali
Dawladda Suuriya oo gacanta ku dhigtay goob afar sano laga haystay
7 Disembar 2016
Image caption Qaybta qadiimiga ah ee magaalada Xalab waxaa muddo afar sano ah gacanta ku hayay jabhadaha
Xoogagga dawladda Suuriya ayaa gacanta ku dhigay qaybihii u dambeeyay ee dhinacaha taariikhiga ah ee magaalada Xalab oo ay gacanta ku hayeen jabhadaha Suuriya sida ay sheegayaan kooxda la socota xaaladda Suuriya.
Qolyaha xuquuqda aadanaha ee Suuriya la socda ayaa sheegay in jabhaduhu ay isaga baxeen ka dib markii ay ciidammada Suuriya ay guulo gaareen habeenimadii.
Jabhaddaha ayaa afartii sano ee la soo dhaafay haystay qaybta qadiimka ah ee magaalada Xalab.
Millatariga Suuriya ayaa hadda haysta in kabadan saddex meeloodaw labo waxayna doonayaan in ay gacanta ku wada dhigaan magaalada oo dhan.
Ka bixitaanka jabhaduhu wuxuu imaanayaa maalmo ka dib markii ciidammada dawladdu ay weerar culus ku kala qaybiyeen qaybihii ay mucaaradku haysteen.
Kumannaan shacab ah ayaa wali ku go'doonsan qaybha ay wali gacanta ku hayaan mucaaradku.
Weriyaha BBC Lyse Doucet oo Xalab ku sugan ayaa sheegtay in saraakiishu ay isu diyaarinayaan in ay dad badan marin siiyaan, iyada oo qoysasku ay isku dayayaan in ay ka baxsadaan dagaalka iyo xaadda adag ee halkaas ka taagan.
Dhanka kalana wasaaradda Difaaca ee Ruushku waxay sheegtay in mucaaradka Suuriya ay gantaal ku dileen lataliye dhanka millatariga ah oo Ruush ah oo Suuriya ku sugnaa.
Kornayl Ruslan Galitsky ayaa u dhintay dhaawac soo gaaray isaga oo ku sugnaa gurigii uu ka daganaa qaybta ay dawladdu maamusho ee magaalada Xalab ayay, sida ay warbixinteeda ku sii dartay wasaaradda difaaca ee Ruushku.